Amabinzana omama ongasekhoyo Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Ukuba uphulukene nje nomama wakho, kwaye uziva ulilize okungakuvumeli ukuba wazi ukuba wenzeni, ufike kwindawo elungileyo; Kweli nqaku siza kuthetha ngenkqubo yokulila kunye neemvakalelo ezichaphazela oku, ukongeza kwi amabinzana omama ongasekhoyo.
1 Ukufa kunye namabinzana omama ongasekhoyo
1.1 Iindlela zokuhlonipha umama ongasekhoyo
2 Amabinzana omama ongasekhoyo
3 Iingcebiso ngokujamelana nentlungu
3.1 Iingcamango ezingakumbi zokugcina imemori yakho ikhona
4 Xolela umphefumlo wakhe
Ukufa kunye namabinzana omama ongasekhoyo
Ukuphulukana nomntu esimthandayo ngumzuzu esingazange sikulungele. Ezo ntlungu zibangelwa kukungabikho kothandekayo lixesha apho kukho iintlungu ezininzi. Ukutshintsha kweemvakalelo ngesiquphe, unxunguphalo, ukuphumla, usizi, kunye noxinzelelo kuyinto eqhelekileyo kule nkqubo.
Iindlela zokuhlonipha umama ongasekhoyo
Xa umama esweleka, ubomi buba ngumceli mngeni, yonke into iba sisaqhwithi esibonakala ngathi ayinasiphelo; Nditsho nasemva konyaka wokungabikho komzimba iintlungu ziyafana, apha sikubonisa ukuba ungayigcina njani imemori yakhe iphila.
Mzisele iintyatyambo, ii-carnations ezimhlophe zisetyenziselwa ukukhumbula ukungabikho komama; ukuze ubeke i-bouquet engcwabeni lakho okanye ubeke nje i-carnations kwi-vase kunye nekhandlela elimhlophe ecaleni kwesithombe sakho; ukumkhumbula ngeyona mbeko inkulu.
Ukuba umama wakho wayekuthanda ukupheka okanye ngaxa lithile wakwenzela isidlo esikhethekileyo, ke ubeke izandla zakho ukusebenza; kwaye wenze eso sidlo usithandayo okanye idessert oyithandayo kakhulu, mema usapho kunye nabahlobo ukuba babelane ukuyikhumbula.
Ukuba unezinto ekulindeleke ukuba umxelele zona ngaphambi kokuba asweleke kwaye ngekhe umxelele, ngoku lixesha lokwenza ikhadi elihle; Ukubhala yonke into oyifunayo, yibophelele kwibhaluni ye helium. Khetha indawo apho ninobabini. bonwabile kunye naye kwaye bayikhululela ibhaluni esibhakabhakeni; Yinto yokomfuziselo kodwa sinokuqinisekisa ukuba uya kuziva wonwabe ukuyenza kwaye kufanelekile ukuyizama.
Olunye unikelo onokuthi uluthande kukurekhoda ividiyo okanye wenze izilayidi ngeefoto zikanyoko ozithandayo, yongeza umculo; ingakanani ekukhumbuza ngayo kwaye wabelane ngayo kwinethiwekhi yakho. Lo nto el mundo fumanisa ukuba lukhulu kangakanani uthando lwakho nonyoko.
Yenza umnikelo kwisiseko kwimemori yakhe; ukuze usebenze kunye nesizathu esihle ebeya kuziva ukuba uzimisele ngaso ebomini. Emva koko, unokwenza umsebenzi wasekuhlaleni ixesha elithile ukunceda abanye.
Amabinzana omama ongasekhoyo
Nangona ndiyazi ukuba andinakukukhapha ngalo mzuzu, umphefumlo wam uyathuthuzeleka kukwazi ukuba ngoku ukwindawo engcono. Ungathandabuzi ukuba inkumbulo yakho iya kuhlala kum nangeenjongo zam, uya kuphila ngonaphakade kwimemori yam, ebomini bam ».
«Ayinamsebenzi ukuba ukude kangakanani, kuba ndiya kuhlala ndikuva usondele apha ecaleni kwam. UTHIXO uthathe isigqibo sokuba lelona xesha ekufuneka umkhaphe ngalo, kwaye nangona ndingaliqondi kakuhle, ndiyalihlonipha icebo lakhe, yiyo loo nto ndikuxelela ukuba uyakuhlala uhlala entliziyweni yam ».
«Yonke imihla ndikhumbula ngolangazelelo olukhulu ubuso bakho obuhle, uncumo lwakho olunomtsalane kunye nokuqaqamba okuvele emehlweni akho. Mama, ndiyakuthanda, ndiyakukhumbula ngonaphakade kwaye ndiyazi ukuba ngenye imini siza kuphinda sidibane. »
Iingcebiso ngokujamelana nentlungu
Umntu ngamnye uphila kabuhlungu ngendlela yakhe; Oku kuyakuxhomekeka kubudlelwane obusondeleyo obunaye nomama wakho kunye nendlela yokujongana nale meko.
Kuyimfuneko ukuba ungqongwe ngabantu, ukuze wandise uxhathiso; kungoko ke ndikwazi ukukuthwala ukusweleka kwalowo umthandayo kwaye ungaziva ulilolo phakathi kwimeko elibuhlungu ngolu hlobo.
Ukuba awusakwazi ukubona umama wakho kweli hlabathi elibonakalayo akuthethi ukuba awukwazi ukuthetha naye kwindiza yomoya; Akuyi kuba lula ukuthetha ngayo nabanye abantu. Nangona ekuqaleni uziva unganqwenelekiyo, oku kuya kukunceda uncume ngokukhumbula amava onke ecaleni kwakho.
Iingcamango ezingakumbi zokugcina imemori yakho ikhona
Kumaxesha anzima kakhulu, xa uziva ukuba awungekhe uthathe enye into ngeentlungu ezihlasela umphefumlo wakho. Uza kucinga ukuba inkumbulo yakho inokucinywa, kuba apha sikunika ezinye iindlela zokuqhubeka nokwenza iinkumbulo phakathi kwelahleko enkulu, ufuna ubuchule kunye nobuchule obuncinci.
Enye yeembono zethu esizithandayo kukwenza isifuba sobutyebi apho uya kubeka khona ezo mpahla, iifoto okanye izinto ezikwenza uzive usondele kuye, unokwenza i-albhamu yememori eneefoto ukusuka xa wawumncinci kakhulu kwezona zangoku.
Ukuba unegadi kwaye umama wakho wayezithanda iintyatyambo kunye nendalo, unokwenza umsebenzi wosapho apho batyala khona ityholo okanye intyatyambo ethile egameni lakhe.
Zithengele ijenali kwaye ubhale iimvakalelo zakho neengcinga zakho imihla ngemihla, oku kuya kukunceda ukuba umelane nentlungu kwaye ukhumbule ngawo wonke umzuzu loo ndawo ikhethekileyo anayo umama wakho.
Ngakolunye uhlangothi, ukuba umama wakho wayengumfazi onomdla othanda ukuthatha uhambo, ke khumbula ukuba yeyiphi indawo ekusafuneka uyindwendwele, thatha iibhegi zakho kwaye wenze olo hambo njengomrhumo kunyoko.
Ngaphambi kokuqhubeka, siyakumema ukuba ufake inqaku elilandelayo kwaye ufunde malunga noku Imithandazo emi-3 yokukhusela oko kuya kukunceda uzikhusele ebubini.
Xolela umphefumlo wakhe
«Mxolele, mhlekazi, ndiyakucela: Ngamana inceba yakho ingangayo inkulu kune ubulungisa bethu; ngenxa yokuba uthembekile kwizithembiso zakho kwaye uthembise inceba kwabo banenceba. Ndiyakholelwa ukuba sele umenzele umama le nto ndiyicelayo ngoku kuwe; Kwaye, Nkosi, yanga imithandazo endiyenzayo namhlanje ingamnandi kuwe. Uye wacebisa ukuba sithethe nabo size simkhumbule esibingelelweni seNkosi.
Musa ukulibala, Thixo wam, ukuba lowo ndikucelayo ububophe umphefumlo wakhe; ngemixokelelwane yokholo olupheleleyo, kwimfihlelo ethandekayo yenkululeko yethu. Ungavumeli nantoni na ikrazule, ngenxa yenceba kaThixo; Ngamana utshaba alunakuphumelela nokuba kungokuhlwa ukuze lukude noThixo walo kwaye umphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo.